N'ihi na ihe niile ibe m Mac ọrụ si n'ebe, maka ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe mere rhyme, iDVD siworo Gaa software mgbe ọ na-abịa na-ere ọkụ DVD. Mụ onwe m ukwuu n'ime-atụ aro ndị enyi m niile na ndị ezinụlọ ha kwesịrị ka ojiji nke iDVD mgbe ọ bụla e nwere ihe na ha mkpa na-eme na-eme DVD na ha onwe ha na-eji a Mac. Otu n'ime ihe ndị mere ọ bụ ya mere bụ n'ihi na nke eziokwu ahụ bụ na Apple si iDVD abịa inbuilt na Mac ji ede, ghara ichefu, ọ bụkwa ihe ndị magburu onwe software-arụ ọrụ na-eme ka ọ n'ezie mfe ọkụ fim na ndị ọzọ jidesie DVD.
Otú ọ dị, a otutu anyị ahụwo iDVD na-a bit nke onye overkill, mgbe niile na anyị chọrọ ime bụ ihe dị mfe dị ike na-egwu a di na nwunye nke nkiri na anyị TV ma ọ bụ na a enyi ebe. Ọtụtụ n'ime anyị nanị mkpa a ngwá ọrụ na-nwere ike mfe ọkụ fim, videos, na foto jidesie a DVD, na kwa ezigbo ngwa ngwa na-enweghị anyị na-enwe na-enwe nchegbu banyere ihe ọ bụla nke ndakọrịta okwu ma ọ bụ usoro nke faịlụ a na-nsure.
Anyị gbalịrị ịchọta ihe kasị mma ngwá ọrụ nke ga-ekwe ka onye ọ bụla na-eme nnọọ otú ahụ ma mgbe scanning site n'ọtụtụ nke nhọrọ na dị na nnukwu ahịa nke internet, anyị sụọ ngọngọ n'elu mkpuru nke ihe ngwa akpọ Wondershare Video Converter Ultimate.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ụzọ elu ndị ọzọ karịa iDVD n'ọtụtụ ụzọ ma otú mfe iji na-arụ ọrụ na ị na-agbụ na-ada na ịhụnanya na nke a dị ịtụnanya software. Ọ na-eme ọtụtụ ihe karịa nnọọ na-ere ọkụ faịlụ jidesie DVD. The ogologo ndepụta atụmatụ bụ nnukwu na a n'aka ogbugba egosi nke ọma, fun oge nke na-echere maka onye ọ bụla bụ onye nwere a ngwa. A bụ ihe a sinik peek na ya ọtụtụ atụmatụ dị ka e n'okpuru.
Tọghata n'ụlọ DVD maka ojiji nkeonwe
Stream media faịlụ site na PC na TV
Nyefee converted na ebudatara video site WiFi
Ọkụ vidiyo na DVD maka ojiji nkeonwe
Dezie videos n'ihu gị tọghata ma ọ bụ ọkụ
M ike igosi na ị na-aga n'ihu na ibudata a dị ịtụnanya nke a software ozugbo. Soro a njikọ eme na na ozugbo ị ebudatara na arụnyere ngwa na kọmputa gị, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ dị ka nyere n'okpuru na-esi ọkụ a DVD enweghị na-eji iDVD.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori Wondershare Video Converter Ultimate na gị Mac, mgbe ọ na e ọma ibudatara na arụnyere. Ọ bụ a ọma e software, na ya mere ị kwesịrị ị na-ahụ na ọ dị mfe ịnyagharịa gị site na nhọrọ nyere na interface nke ngwa.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ngwa e ulo oru, ị ga-ahụ na ọ nwere nnọọ mfe ma dị mfe ịghọta okirikiri nhọrọ ukwuu. The taabụ niile isi ọrụ na-enịm nri na elu nke isi interface na ndabara ngwa mgbe nile ga-emepe na taabụ 'tọghata' dị ka họrọ nhọrọ.
N'ihi na 2nd nzọụkwụ, ị ga-ahọrọ taabụ ma ọ bụ nhọrọ nke 'Ọkụ', ya mere, na-aga n'ihu na pịa ya. Nke a bụ interface nke ga-ekwe ka ị na-ere ọkụ nke dị iche iche nke video formats na ọtụtụ ndị ọzọ na na DVD na ị ga-achọ.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo unu na-abanye ma ọ bụ pịa 'Ọkụ' taabụ, ị ga-aba interface maka usoro nke na-ere ọkụ DVD. Na nke a interface, ị nanị nwere ịdọrọ na dobe ma ọ bụ tinye faịlụ na ị ga-achọ iji. Ọ bụrụ na ị na-adịghị n'ime Ịdọrọ na idobe faịlụ na kama ga-amasị tinye ha aka, nanị pịa na gbakwunyere ịrịba ama ma ọ nnọchianya (+), nyere na ala aka ekpe akuku nke ngwa interface. Nke a ga-ekwe ka ị na-agagharị gị Mac kọmputa maka ndị dị iche iche faịlụ na ị nwere ike họrọ ndị ị ga-achọ tinye ma ọ bụ mbubata. Ozugbo faịlụ e kwajuru, ị pụrụ ọbụna dezie fim ma ọ bụ obere vidiyo site na nanị ịpị bọtịnụ akpọ 'Dezie' nke e nyere nri na-esote na faịlụ, n'aka-nri n'akụkụ.
Nzọụkwụ 4: Ị nwere ike ugbu a ịgbanwe menu isiokwu ma ọ bụ atụrụ nke gị DVD site na-ahọpụta si ọtụtụ nhọrọ na dị kwupụta na ala nke ngwa interface.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo i mere mgbanwe ị chọrọ na ihe niile bụ ka kwa gị afọ ojuju, ị nwere ike ịga n'ihu na pịa na 'Ọkụ' button mezue usoro. Ị ga-fanye a ide ma ọ bụ recordable DVD n'ihu na ịpị 'Ọkụ' button ezie, ka mechaa mgbanwe na-amalite n'ezie apa ọkụ usoro.
Wondershare Video Converter Ultimate Ga ugbu a ọkụ nke faịlụ na-akpaghị aka na-akwado otu ugboro usoro bụ ihe ịga nke ọma n'elu.
Ọ bụ na mfe ọkụ fim jidesie a DVD iji Wondershare Video Converter Ultimate. Ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu na-enwe na-ekiri nkiri kacha amasị gị na enyi gị 'ebe ma ọ bụ mgbe ọ gara ileta ezinụlọ, na ọbụna ke enweghị internet ma ọ bụ WiFi. I nwekwara ike onyinye ndị a DVD gị nso na ndị hụrụ n'anya ka ha na-enwe gị oke ma ọ bụ collection fim nnọọ mfe.
> Resource> DVD> Olee otú iji ọkụ a DVD enweghị iDVD maka Mac